Afar Sano Guuradii Ka Soo Wareegtay Geeridii Marxuum Cawke Iyo Xusuusta Taariikhdiisi | Marsa News
Afar Sano Guuradii Ka Soo Wareegtay Geeridii Marxuum Cawke Iyo Xusuusta Taariikhdiisi
November 15, 2019 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Ilaahay naxariistii jano haka waraabiye axmed xasan suufi oo loo yaqaanay Cawke waxa uu ku dhashay magaalada togwajaale sanadkii 1948kii, isla degmada uu ku dhashay ee togwajaale ayuu kun sagaal boqol iyo lixdamaadkii ka bilaabay waxbarashadiisii dugsiga hoose 1964kii waxa uu dugsigiisi dhexe ka bilaabay deeganka cadaadlay halkaasi oo uu ku dhamaystay waxbarashadiisi dugsiga dhexe.
1970kii ayuu dhameeyay dugsigiisi sare oo ahaa camuud, oo ku yaalay magaalada boorame ee gobolka awdal haatana ah jaamacada camuud,
Intaa kadib waxa uu wariye cawke galay tababarkii dugsiga xalane, kadib markii uu soo dhamaystay tababarkaa xalane waxa uu cawke shaqo ka bilaabay magaalada berbera oo uu ka noqday macalin.
Alle haw naxariiste axmed xasan cawke waxa uu ahaa saxafi gayiga afka somaliga lagaga hadlo caan ka ah, sanadkii 1973kii ayuu wariye cawke bilaabay shaqadii ugu horaysay ee mihnada saxaafada isagoo xiligaa ka hawlgalay radio muqdisho, mudo kadibna waxa uu shaqo ka bilaabay telifishankii somaliya.
Bilawgii sideetamaadkii waxa uu wariye cawke noqday wariyaha gaarka ah ee madaxwaynihii dawladii kacaanka, waxaanu u ahaa ilaa burburkii dalka 1991kii.
Sanadkii 1996kii ayuu wariye cawke ku biiray laanta afka somaliga ee idaacada bbc-da, halkaas oo uu ka shaqaynayay ilaa 2008-dii
isla sanadkaasi waxa kale oo uu ku biiray kana soo shaqeeyay idaacada afka somaliga ee VOA-da, sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay telifishanada afka somaliga ku hadla ee horn cable tv, universal, tv, iyo waliba somaliland national tv.
Hibadaasi waxay isugu jirtay waa marka koowaade in aanay maskaxdiisa iyo qalbigiisa meel ku lahayn waxa loo yaqaan fal-ka-nax, Cid kasta oo lala hadlayo wuxuu Allah garansiin jiray sida wax looga dhaadhiciyo ama ugu yaraan intaa uu hadlayo uu maskaxda ka qabsan jiray.
Wuxuu lahaa cod u gaar ah, oo ku wanaagsan dhegeysiga, si wanaagsan uu u tabin jiray, hadba sida loo rog rogo, kor in loo qaado iyo in hoos loo dhigo, in la boobsiiyo iyo in si tartiib ah loo yiraahdo, in la sii cusleeyo iyo in la khafiifiyo.
Codkaas ma ahayn oo keliya inta af Soomaaliga ku hadasha ee barnaamijyadiisa ku taxani mid ay qiran oo kaliya, balse Waxa iyana qiray dad aan af Soomaaliba ku hadal. Waa farsamayaqaannadii wiilasha iyo gabdhahaba lahaa ee ajaanabkii ka wahlgali jiray istuudiyayaasha BBC.
Taas ayaana keentay in uu Axmed ka duwanaado weriyayaasha badankood oo iyagu dhinac uun ku kooban ama u badan. Axmed wuxuu ahaa nin isku si ugu wanaagsan barnaamijyada wararka, kuwa cayaaraha, waxbarashada iyo dunida ama madaddaalada.
Axmed xasan cawke alle naxariistii jano haka waraabiyee waxa uu xaqii ku yimid 17/11/2015-kii oo haatan laga joogo afar sano.
Marxuun cawke waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii jano ka waraabiyo oo qabriga u waasiciyo.